Ndụmọdụ maka ịhọrọ achịcha kachasị ahụike | Bezzia
Ndụmọdụ maka ịhọrọ achịcha kacha mma
Nke Torres | 20/10/2021 23:55 | Nri
Achịcha, na mgbakwunye na ịbụ nri dị mma, bụ ihe mgbakwunye na nri dị na tebụl nke ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa. Enwere ụdị achịcha a na -apụghị ịgụta ọnụ, mana ha niile na -amalite site n'otu ntọala, ntụ ọka na mmiri. Yist, nnu, ọka ma ọ bụ ụdị mmeju ọ bụla nwere ike ịgbakwunye na mgwakota agwa, ga -eme ka achịcha ahụ baa ọgaranya.
Mana ọbụlagodi yist adịghị mkpa ma ọ bụrụ na anyị nwere ihe na -eko achịcha, ezigbo igodo achịcha mbụ. Agbanyeghị, n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya, emebela usoro achịcha, ma ọ bụ nke ziri ezi, mgbochi carbohydrates. Kedu ihe doro anya na -etinye nri a bara ụba na tebụl ndị mmụọ ọjọọ, na -ezighi ezi n'ọtụtụ oge. N'ihi na Dị ka ndị ọkachamara n'ihe oriri na -edozi ahụ si kwuo, achịcha bụ nri dị mma ma dị mkpa na nri n'ihi ọtụtụ uru nke ngwaahịa ọdịnala a.
1 Kedu otu esi ahọrọ achịcha kacha mma?
1.1 Aghụghọ ịmata ezigbo achịcha
Kedu otu esi ahọrọ achịcha kacha mma?
Sourdough na -ewu ewu na ọ bụ ihe na -eduga na mgbagwoju anya na ikwere na achịcha e ji ntụ ọka mee na -adị mma maka nke a. Sourdough na -eme ka achịcha na -atọ ụtọ nke ukwuu, na -esiwanye ike, ma na -adịte aka na ọnọdụ dị mma, mana ọ naghị eme ka ọ nwee ahụike. A na -enweta ihe na -eko achịcha site na ịgba ụka nke yist nke nwere ọka ọ .ụ .ụ.
Site na usoro dị nwayọ ma kpachapụ anya, a na -enye mmiri mmiri ara ehi nke ọka ọ andụ andụ, a na -emepụta mgwakota agwa nke na -eme achịcha achịcha ahụ iji nweta ahụ na ụdị dị iche karịa nke e nwetara yist. Ugbu a n'agbanyeghị usoro ịgba ụka a na -eme ka achịcha ahụ baa ọgaranya n'ihe gbasara ụtọ, ọ bụghị ihe na -eme ezigbo achịcha ka ọ bụrụ nke dị mma.
Ihe na -eme achịcha dị ezigbo mma bụ ụdị ntụ ọka e ji eme ya. Kpọmkwem, a na -eji achịcha ọka wit niile eme achịcha kacha mma, ya bụ, ọka zuru oke. N'ihi ya a na -enweta ihe niile nke ọka ọ andụ usedụ, hụrụ na shei. Akụkụ mpụta ahụ nke ewepụrụ iji nụchaa ọka wit ma mee ka ọ bụrụ ntụ ọka ọcha.
Ọkpụkpụ ma ọ bụ akụkụ dị elu nke ọka nwere mineral, eriri soluble na vitamin B yana n'ime carbohydrates na protein. Mgbe a na -eji achịcha ọka mee achịcha, ọ na -aghọ nri juputara na njirimara nri ndị a niile. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhọrọ achịcha kacha nwee ahụike, ị ga -elele anya mgbe niile nke ejiri ntụ ọka wit mee.
Aghụghọ ịmata ezigbo achịcha
Ugbu a anyị matara na achịcha kacha mma bụ naanị nke ejiri ntụ ọka wit mee, anyị ga -achọpụta aghụghọ iji mata nhọrọ kacha mma. N'oge a ị nwere ike ịchọta achịcha n'ụdị ụlọ ahịa niile, mana ihe kachasị mma mgbe ọ bụla enwere ike bụ ịga n'ụlọ ọrụ aka. Ọ bụrụ na ị bi n'obodo, ị ga -enwe ihu ọma inwe onye na -eme achịcha a tụkwasịrị obi na -erikwa achịcha dị ukwuu.
Iji họrọ achịcha kacha mma na nlele, na -achọ mgbe niile nke dị ọhụrụ, nke a na -ekegheghị. Banyere ihe onyonyo a, zere achịcha mara mma nke ukwuu, na-acha ọcha na nke na-enwu enwu, n'ihi na ha na-abụkarị achịcha esiri esi nke nwere ntụ ọka a nụchara anụcha. Achịcha dị mma ga -enwerịrị ọdịdị nka, ebe a na -ahụta achịcha na -eme ka ọ bụrụ udidi na ụtọ ya nke pụrụ iche.
Maka achịcha e tinyere, lelee akara ahụ iji hụ ma ọ bụ achịcha dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị. Aha mkpado, arụrụ ụlọ ma ọ bụ ọrụ aka nke a na -ejikarị eme ihe abụghị ihe na -egosi ezigbo achịcha. Ihe ị ga -elele bụ akụkụ nke ihe mejupụtara ya na ebe ahụ ị ga -achọpụta ma ọ bụrụ ngwaahịa dị mma n'ezie. Ntụ ọka, mmiri, nnu na yist ma ọ bụ ihe na -eko achịcha kwesịrị ịpụta na ndepụta ihe mejupụtara ya. Ọ bụrụ na o nwere ihe karịrị ihe oriri 5, dị ka ọ dị na achịcha esiri esi, ị ga na -eche achịcha na -adịchaghị mma.
Site na usoro aghụghọ ndị a, ị nwere ike họrọ achịcha kacha mma ma na -anụ ụtọ nri a na -atọ ụtọ kwa ụbọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Nri » Ndụmọdụ maka ịhọrọ achịcha kacha mma
Ndụmọdụ na aghụghọ iji kpochapụ ísì ọjọọ n'ụlọ